CIN Khabar पुरूषप्रति बदलाभाव राखेर वा महिलालाई हेपेर समानता असम्भव
राधा पोखरेल सोमबार, फागुन २४, २०७७, ०२:४५:००
मार्च ८ अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस । यस दिवसको आफ्नो गौरवशाली इतिहास छ ।
संसारभरिका महिलाहरूले गौरव गर्छन् यस दिवसप्रति । यस अवसरमा यस दिवसका मुख्य व्यक्तित्व क्लारा जेटकिनलगायत संसारभरका सङ्घर्षशील अग्रजहरूप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दछु ।
संसारभरिका महिलाहरूले यस दिवस मनाउन थालेको १ सय ११ वर्ष पुरा भएको छ । एक शताब्दी लामो सङ्घर्षपश्चात पनि लिङ्गीय लगायत बिभिन्न भेदभाव फरक-फरक रूप र प्रकृतिमा संसारभर कायम छ ।
नेपालको संविधान-२०७२ ले शब्दमा समान अधिकार सुनिश्चित गरे पनि कर्ममा विभेद जारी छ । संविधानमा जे लेखिएको भए तापनि धर्म, संस्कृति र परम्पराको नाममा महिलामाथि हुने भेदभावलाई समाजले स्वीकृति दिँदै आएको छ ।
सामान्यत: नेपाली महिलाहरूका लागि कानुनी उपचार काकाकूललाई पानी बराबर भएको छ । समाजमा व्याप्त रूढिवाद र अशिक्षाको कारण नेपाली महिलाहरूको ठूलो हिस्सा कानुनको पहुँचभन्दा बाहिर छ ।
पहुँच भएकाहरू पनि पक्षपातको शिकार भएका छन् । देशमा कानुनका रक्षकहरू नै भक्षक भएका प्रशस्त उदाहरणहरू छन् ।
नेपाली महिलाहरूमाथि हुँदै आएका र भइरहेका शोषणका रूपहरू बहुरूपी छन् । लैङ्गिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, यौनिक, शैक्षिक आदि इत्यादि ।
प्राकृतिक रूपमै महिलाहरू कमजोर हुन्छन् भन्ने भ्रम महिला, पुरूष दुबैमा जबरजस्त छ । तर अहिलेसम्मको अनुसन्धानले जैविक रूपमा पुरूषभन्दा महिला कमजोर हुन्छ भनेर कहिँकतै प्रमाणित गरेको छैन ।
भ्रमलाई बोकेर हामी महिलाहरू मानसिक रूपमा आफूलाई कमजोर बनाइरहेका छौँ । मेरो विचारमा हामी महिलाहरूलाई प्रकृतिले होइन, यस पुरूषप्रधान समाजको मूल्य, मान्यता र संस्कारले कमजोर बनाइरहेको छ ।
"पुरूष प्रधान" भनेर सम्बोधन गर्दा मेरा कतिपय पुरूष साथीहरू रिसाउने गर्नुहुन्छ । मेरो विनम्रतापूर्वक अनुरोध छ- "साथीहरू ! मैले कुनै पुरूष व्यक्ति विशेषलाई आरोपित गर्न खोजेकी होइन; केवल हाम्रो समाजमा भएको प्रवृत्तिको कुरा मात्रै गरेकी हुँ। कृपया रिसानी माफ गर्नुहोला ।"
कतिपय महिलाहरू छोरी भएर जन्मिएकोमा ठूलो गुनासो छ आफैँप्रति । तर म छोरी भएर जन्मिएकोमा गर्व गर्दछु । किन कि, छोरी भनेका यस श्रृष्टिलाई निरन्तरता दिने सिर्जनाशक्ति भएकी आमा हुन् ।
भ्रुणदेखि नै छोरीहरूमाथि गरिने भेदभावजन्य व्यवहारले उनीहरूको शारीरिक र मानसिक बनोटमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पर्न जान्छ । म अनुरोध गर्न चाहन्छु-"आमाहरू ! भ्रुणदेखि नै अन्याय नगर्नुस् छोरीहरूमाथि । छोरीप्रति गर्व गर्नुहोस् र छोरासरह व्यवहार गर्नुहोस् ।"
बलात्कार, महिला बेचबिखन र विशेषगरी मधेसमा डरलाग्दो रूपमा रहेको दाइजो प्रथाले नेपाली नारीहरूलाई मृत्युको मुखमा धकेली रहेको छ । यस्ता मानवता विरोधी अपराधजन्य कृत्य गर्नेहरूलाई राज्यले हदैसम्मको कानुनी कारबाही र समाजले सामाजिक रूपमा बहिष्कार गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ ।
आर्थिक विपन्नताको कारण कतिपय नेपाली नारीहरू वेश्यावृत्तिमा लाग्न पनि बाध्य छन् । कतिपय होटल, रेस्टुरेन्ट, डान्सबार, मसाज सेन्टर अघोषित वेश्यालय बन्न पुगेको छ ।
प्रहरी प्रशासनकै मिलिभगतमा त्यस्ता ठाउँहरूमा यौन व्यापार भइरहेको कुरा बेलाबखत मिडियाहरूमार्फत समाचार सार्बजनिक भइरहेका छन् । मलाई लाग्छ स्वैच्छाले कुनै पनि सद्दे महिला वेश्यावृत्तिमा लाग्नै सक्दैन यसमा संलग्न महिलाहरूलाई घृणा गर्नुभन्दा सबैलाई रोजगारी उपलब्ध गराई त्यस्तो घृणित पेसाबाट मुक्त गराउन सिङ्गै राज्य र समाज लागि पर्नु जरूरी छ ।
कानुनले बर्जित गरे पनि बालविवाह अहिले पनि समस्याको रूपमा रहेको छ । विशेष गरी मधेसमा दलित समुदायभित्र बालविवाहको समस्या चर्को छ।
शिक्षा, सामाजिक चेतना र आर्थिक विपन्नताको कारण यो सब भइरहेको छ, मधेसका दलित बस्तिहरूमा । राज्यले विशेष कार्यक्रम बनाई यस्ता विकृति रोक्न पहल गर्न जरूरी छ ।
धर्म, परम्परा, संस्कार र अन्धविश्वासको कारण नेपाली महिलाहरूमाथि अत्यन्तै हिंस्रक दानवीय व्यवहार भइरहेको छ । बोक्सीको नाममा मानव मलमूत्र खुवाउनु, शारीरिक यातना दिनु त्यति मात्र नभएर हत्यासमेत गरिनु महिलामाथि हुने हदैसम्मको अत्याचार हो ।
छाउपडी, देउकी, कुमारी प्रथा पनि महिलामाथिको हिंसा हो ।
क्रमश: समाजमा आइरहेको जागरणसँगै यस्ता परम्परा घट्दै त गएको छ, तर यस्तो नियमित प्रकृयाले अझैँ कैयौँ वर्ष नेपाली महिलाले हिंसा भोगिरहन बाध्य हुनेछन् ।
तसर्थ, राज्यले समय सापेक्ष कानुनको निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वयन, नागरिकस्तरमा जनचेतना अभियानको माध्यमद्वारा यस्ता हिंसात्मक कुप्रथाको शीघ्र अन्त्य गरिनु पर्दछ ।
लैङ्गिक समानता र स्वतन्त्रताको अभियानसँगै निरपेक्ष समानता र स्वतन्त्रताको उपभोग गर्ने विकृति पनि समाजमा बढ्दै गइरहेको छ । समानताको अर्थ पुरूषले बच्चा जन्माउनु पर्छ भन्ने हुनसक्दैन । किनकि प्रकृतिले त्यो अधिकार महिलालाई मात्र दिएको छ ।
त्यस्तै स्वतन्त्रता भनेको व्यक्तिगत अराजकता होइन । व्यक्तिले प्राप्त गरेको अधिकार र कर्तव्यको सुन्दर संयोजन हो । समानता र स्वतन्त्रताको नाममा केही महिलाहरूले गर्ने कतिपय उछृङ्खल व्यवहारले महिला समानता र स्वतन्त्रताको अभियानलाई कमजोर बनाइरहेका छन् । यसमा हामी महिलाहरू बढी सचेत हुन जरूरी छ ।
घर-घरमा महिलाले महिलामाथि गर्ने हिंसा, महिला मुक्तिको लागि ठूलो बाधक बनिरहेको छ । पुस्तान्तरणको कारण पैदा भएको सासू-बुहारी र आमा-छोरीबीचको अन्तरविरोध होस् वा अशिक्षा र असल संस्कारको अभावमा देखिएको एकले अर्काको खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति होस् ।
यसले हामी महिलाहरूलाई पछि पारिरहेको छ । यस्ता आफैँलाई पछि पार्ने गलत हर्कतहरू अब बन्द गरिनु पर्दछ ।
समानताका नाममा असम्भव कुरा माग गर्ने विकृत मानसिकता पनि हामी केही आधुनिक नारीहरूमा मौलाउँदै गइरहेको छ । यी दुबै विकृत मानसिकताबाट नारी-पुरूष मुक्त हुनु पर्दछ । कृपया ढोङ्ग र आडम्बर त्याग्नुहोस् ।
नारी स्वतन्त्रताको वकालत गरेजस्तो गरेर नारीकै हुर्मत नलिनुस् । कृपया दुराभाव राखेर होइन, सद्भाव राखेर सिंगै नारी जातिको सम्मान गर्नुस् ।
हिंसा, आखिर हिंसा नै हो । चाहे महिलाविरूद्ध गरिने हिंसा होस् वा पुरूषविरूद्ध । महिला र पुरूष रथका दुई पाँग्रा हुन् । पुरूषप्रति बदलाभाव राखेर वा महिलालाई हेपेर समानता संभव छैन ।
तसर्थ, एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्दै सहयात्रा गरौँ । अनि कायम गरौँ नारी-पुरूष समानता ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, फागुन २४, २०७७, ०२:४५:००